မြန်မာလူထုလူတန်းစားများအရေးvs ပြည်ထောင်စုအစိုးရမြန်မာ (သူတို့လျှောက်သင့်သည့်လမ်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာလူထုလူတန်းစားများအရေးvs ပြည်ထောင်စုအစိုးရမြန်မာ (သူတို့လျှောက်သင့်သည့်လမ်း)
မြန်မာလူထုလူတန်းစားများအရေးvs ပြည်ထောင်စုအစိုးရမြန်မာ (သူတို့လျှောက်သင့်သည့်လမ်း)
Posted by kyawhan21 on Aug 16, 2011 in Copy/Paste |7comments
ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအမည်ခံကာ လူထုအစိုးရ ဖြစ်စေရမည်ဟူသော ကြွေးကြော်သံဖြင့် 2011 မတ်လ 30 ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်သည်၊ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှာ ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုကို ပြည်ဝစွာရရှိထားသည်ဟုဆိုသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ခိုင်လုံစွသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ၊ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဦးထိပ်ထားပါသည်ဟုအစဉ်တစိုက်ပြောဆိုနေပြီး လက်တွေ့တွင်မူ လူတန်းစားနိုင်ငံရေးနှင့်ကင်းကာ ဒီမိုကေ၇စီရေးနှင့်လူအခွင့်ရေးများအား လုံးဝအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း လူထုလူတန်းစား အသီးသီးကခိုင်မာစွာယုံကြည်နေကြပါသည်၊ ထိုကြောင့် ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် လူထုလူတန်းစားနိုင်ငံရေးကို ခိုင်ခိုင်မာမာဆောင်ရွက်သည့် လူထုအစိုးရဖြစ်လာစေရေးအတွက် ပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒသဘောထားများကို လူထုလူတန်းစားထဲသို့ ထဲထဲဝင်ဝင်လေံလာရန်ကား အရေးတကြီးလိုအပ်နေပေသည်၊
တိုင်းပြည်အားအသွင်သစ်ဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင်ပြည်သူ၏ဆန္ဒသည်အဓိကဖြစ်ပြီး လူထုလူတန်းစားတစ်ရပ်လုံးသွေးစည်ညီညွတ်စွာပါင်မှသာလျှင် အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်၊ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် ဆင်းရဲသားပပြောက်ရေးကိုစီမံကိန်းချမှတ်ထားသည်၊ထိုစီမံကိန်းကို ပြည်သူများကအောင်မြင်ရန်အလိုရှိပါသည်၊သို့သော် မ ဆ လ ခေတ်နှစ်တိုနှစ်ရှည်စီမံကိန်းများကဲ့သို့ ပြည်သူကိုအချိန်ဆွဲလိမ်ညာပြီး တိုင်းပြည်ပျက်သုန်းမည်ကိုစီုးရိမ်နေကြပါသည်၊ထိုသံသယများအား လူတန်းစားနိုင်ငံရေး၊ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်လူအခွင့်ရေးများကို ဦးစွာပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ချေဖျက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်၊
လူတန်းစားများအားတိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတွင် မိမိတို့ကံကြမ္မာကို မိမိတို့ လွတ်လပ်စွာ ဖန်တည်နိုင်ခြင်းဖြင့်ပါဝင်လာစေသင့်သည်၊ထိုသီု့ပါဝင်လာစေရန် အစိုးရ၏ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိသော ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အလုပ်သမားသမဂ္ဂနှင့်တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်စေပြီး မိမိတို့လူတန်းစားအရေးကိုမိမိတို့ စည်းဝေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးစေကာ ပြည်သူလူထု၏တစ်ခဲနက်ထောက်ခံမှုဖြင့် နိုင်ငံတော်အာဏာအရပ်ရပ်ကို သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရရှိလာသော အစီုးရအဖွဲ့အား အပြုသဘောဆောင်ဆန္ဒပြုတင်ပြပိုင်ခွင့် ပေးမှသာလျှင် လူတန်းစားနိုင်ငံရေးအသွင် သက်ဝင်ပြီပြင်စေပြီး နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်၊
မ ဆ လ ကျဆုံးခန်းတွင်1963ခုနှစ် ကျေင်းသားသမဂ္ဂ အားအကြမ်းဖက်ဖေါက်ခွဲ ဖြိုခွင်းပြီး အပြစ်မဲ့ကျောင်းသားများအားကွန်မြူနစ်များဟုလက်ညှိုးထိုးကာ ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်း၊မသေမရှင်ဖြစ်နေသော အပြစ်မဲ့ကျောင်းသားများအားကျဉ်းတစ်ခုတည်းတွင် အရှင်လတ်လတ် ဘော်ဒိုဇာဖြင့်ထိုးကော်ကာမြေမြှပ်စေခြင်းဖြင့် လူတန်းစားနိုင်ငံရေးအား လူမဆန်စွာ အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးစေခြင်းသည် အဓိကအခန်းမှပါဝင်ခဲ့ပြီး လူတန်းစားရေးနှင် ဒီမိုကရေစီရေးတို့၏နေရာတွင် စစ်အာဏာရှင်ဝါဒကိုကိုင်စွဲကြာ လူမျိုးရေးသွေးခွဲရေး၊အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးတို့ကို အစားထိုးစေခြင်းဖြင့် လူအခွင့်ရေးဆုံးရှုံးရသော သမိုင်းဆိုးအမွေကိုပေးခဲ့သည်၊ထိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြောင့်ပင်1963-1974-1988-2008 ခုနှစ်များတွင် လူထုလူတန်းစားများ၏ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ဖော်သော လူထုအုံကြွမှုများအား လူတန်းစာနိုင်ငံရေးအမြင့်ဖြင့် မဖြေရှင်းဘဲ တပ်မတော်အားကိုသုံးကာ လက်စားချေ အကြမ်းဖက်သသ်ဖြတ် ထောင်သွင်း ညှင်းပန်း နိမ်နင်းဖြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်ဖျက်ဆစီးခဲ့သည်၊ အာဏာရှိသူများမှာ ငွေရှင်ကြေးရှင်တို့၏နွံတွင်နစ်ကာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအား အာဏာရှင်နှင့်ငွေရှင်အကျိုးတူ ဝေမျှ အပိုင်စီးခဲ့ခြင်းကြောင့် လူတန်းစားနိုင်ငံရေးပျက်စီးကာ စီးပွားကပ်(economic depression) ကိုပြည်သူလူထုခံစားလာရသောကြောင့်လူတန်းစာစအသိးသိး၏ အုံကြွမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်၊သို့ရာတွင် မ ဆ လ အစိုးရသည်လူတန်းစားနိုင်ငံရေး ပြသနာကိုစနစ်တကျကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့်မ ဆ လ စနစ်ဘုန်းဘုန်းကျ ပြိုလဲ ပျက်သုဉ်းခဲ့ရပြီး 1988 တွင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တဖန်အသက်သွင်းခဲ့ရသည်ကို သမိုင်းသင်ခန်းစာယူသင့်ပေသည်။
စစ်အာဏာရှင်၏ လက်တွင်းသို့ ကျရောက်လာသော မြန်မာလူထုလူတန်းစားသည် နိုင်ငံတော်၏တာဝန် အစစ်ဖြစ်သော နိုင်ငံသားတစ်ဦးခြင်း၏လုံခြုံမှု ကျမ္မာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကလုံးဝမရရှိသည့်အပြင် စစ်အာဏာရှင်များနှင့် ခေတ်သစ်ကိုလိုနီအရင်းရှင်လက်သစ်များ၏ လုပ်အားနှင့် လုပ်ခအမြတ်ထုတ်သွေးစုတ်မှုကိုခံရပြီးတောင်သူလယ်သမားများမှာ စစ်အာဏာရှင်နှင့် ပြည်တွင်းအရင်းရှင်တို့၏ လယ်ယာမြေ အကြမ်းဖက်မှုများကို ခါးစည်းခံခဲ့ရသည်၊ထိုပြယုဂ်များသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်မှု ဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြပြောဆိုလာသော ကျောင်းသားများနှင့် လူထုလူတန်းစားအသိးသီးနှင့် မီဒီယာများအား မတရားဖမ်းဆိးချုပ်နှောင်ခြင်း လူညွန့်တုံးအောင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအပြင် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်နှင့်အကျဉ်းချမှုများကို ဆက်တိုက်ကျူးလွန်လာသော စစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ ဆိုးယုတ်မှုတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တည်ထောင်ခဲ့သည် တပ်မတော်သည် ပြည်သူကိုသတ်သည့်သားသတ်သမားများအဖြစ် ပြည်သူ၏မုန်းတီးမှုကိုပါ သမိုင်းဆိုးအမွေအဖြစ်ခံယူခဲ့ရသည် အလွန်သတိပြုဆင်ခြင်သင့်သည်၊
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် လူထုလူတန်းစား၏ အားကိုသွေးစည်းညီညွတ်စွာ ရယူရန် လွန်စွာအရေးကြီးပြီး ပြည်သူ၏ူတစ်ခဲနက်သောဆန္ဒကို မည်သူမျှမကျော်လွှားနိုင်သည်ကို သတိမူရမည်ဖြစ်သည်၊ထိုပြည်သူ၏ဆန္ဒအားတစ်စုတစ်ဝေးတည်းသေါးစည်းညီညွတ်စွာရယူနိုင်ရန် လူတန်းစားနိုင်ငံရေးကို ဗဟိုအခြေပြုသောကျောင်းသားသမဂ္ဂ အလုပ်သမားနှင့်တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂများကို လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းစေပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်ရသောအခွင့်အေ၇းကို တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် ဖန်တည်းပေးရမည်မှာပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ လူတန်းစားနိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်သော သမိုင်းပေးတာဝန်ဟုဆိုရပေမည်၊
နိုင်ငံ၏သွေးစည်းညီညွတ်မှုသည် သမိုင်းကောင်းပေါ်တွင်တည်မှီပါသည် မြန်မာတို့၏1910-မှ1947 ထိသမိုင်းသည် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် သမိုင်းတင့်သောနိုင်ငံ အဖြစ်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများသည်လည်း ရဲဝံ့ပြောင်မြောက်သော လူမျိုးများအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါသည်အနာဂတ်မြန်မာတို့သည် မိမိတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုသောစိတ်ရှိလာစေရန်နှင့်ချစ်မြတ်နိုးစေရန် သမိုင်းကောင်းအစစ်အမှန်ကို ဖေါ်ထုတ်ပြီး လက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးသင့်ပါသည်၊သမိုင်းစစ်ကိုမလိမ်သင့်ပါသမိုင်းပျောက်လဆင် နိုင်ငံပျောက်မည်၊နိုင်ငံပျောက်လျှင်လူမျိုးပျောက်မည်ဖြစ်ပါသည်၊
ခက်တာ သဂျီးတို့လို ဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေက လွှတ်တော်လွှတ်တော် ချွတ်ချော်ဇွတ်အော်
ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ. ရွေးကောက်ပွဲ..လူထုဆန္ဒကောက်ယူတာကို.. (ဘယ်လောက်ညစ်ပါမယ်..ညစ်တေ့ာမယ်ပြောပြော..)ဘယ်သူကမှ.. ငြင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူး.။
ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ.. ယူအက်စ်အစိုးရဟာ..မြန်မာပြည်မှာ.. လူထုဆန္ဒကောက်ပါတော့မယ်ဆိုတာကို.. ဘယ်လိုစွမ်းအားနဲ့..ငြင်းရဲမှာလည်း..။
အဲ..ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့.. ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံဖြစ်လာတဲ့.. လွတ်တော်..လွှတ်တော်အမတ်တွေကို..အာဏာမပိုင်ဘူးဆိုပြီးလည်း ငြင်းခွင့်မရှိတေ့ာဘူး..။
.. ရွေးကောက်ပွဲဟာ..တရားမမျှတပါဘူးဆိုပြီး.. ရီကောပြန်လုပ်မလား.. တရားစွဲမလားပဲရှိတယ်..။
အဲဒီအဆင့်ကိုတောင် မလုပ်နိုင်ရင်..ကျော်သွားရင် ပွဲပြီးသွားပြီလေ…။
အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ..။
အခုအစိုး၇.. လူထုကျေနပ်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်..ပေးထားတဲ့ ကတိတွေမတည်ရင်…
၁).. ရီကော(အယုံအကြည်မရှိအဆိုနဲ့) ..အစိုးရကိုဖြုတ်ချနိုင်လား..
၃) နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ.. မဲနဲ့ဖြုတ်ချနိုင်လား..
၁ရယ်..၂ရယ်မှာ..လူထုအားနဲ့လုပ်ရင်..ပေးထားတဲ့.. အခြေခံဥပဒေ..အာဏာအရ.. စစ်တပ်ကချက်ချင်းအာဏာသိမ်းလိုက်မှာပဲ..။
ဆိုတော့.. တပ်ကအာဏာထပ်သိမ်းတာကို… လူထုကြီးလိုလားကြသလား..
အပေါ်ယံကြောလေးပဲ ရှပ်ပြောကြည့်မယ်နော်။ ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းသာ ယူအက်စ်က လက်ခံရိုးရှိရင် အီရန်နဲ့ဆက်ဆံရေး ပြေလည်သင့်ပြီလေ။ မြောက်ကိုရီးယားမှာလည်း ဒီမိုကရေစီနဲ့ရွေးကောက်တယ်ဆိုပဲ။ တရုတ်လည်း ထိုနည်းတူစွာ၊ အာဏာရှင်နိုင်ငံများစွာမှာလည်း ထိုနည်း၎င်း..။ သို့သော်…ယူအက်စ်သည် အခြေအနေရ (သူ့လူတိုင်းလည်း မမှန်တာမို့) အစိုးရတွေနဲ့ပဲ ပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သောက်တလွဲတိုင်းပြည်က လွှတ်တော်နဲ့ နီးနီကပ်ကပ် မဆက်ဆံဘူး။ (လိုအပ်လို့ ဆက်ဆံလည်း လူရွေးတယ် selectively) တနည်းအားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုမှု စည်းကို ကွန်ဂရက်နဲ့ အစိုးရ နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။ ကိုယ်က ဘာလုပ်ပေးပါလို ဩဇာမပေးနိုင်ရင် အလုပ်ဖြစ်စေတဲ့နည်းကိုသုံးတယ်။..
အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ အသုဘ….
အခုအစိုး၇.. တဖက်သတ် အခြေခံဥပဒေနဲ့ တဖက်သတ် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး
၁).. ၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို မျက်ကွယ်ပြုနိုင်ရင်
၂) အတိုက်အခံ၊ အပစ်ရပ်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းခဲ့သမျှကို စက္ကူစုတ်သဖွယ် သဘောထားလို့ရရင်
၃) ပေးသမျှ ရသမျှနဲ့ကျေနပ်ကြစမ်းဆိုတာ ဖြစ်သင့်တဲ့ အမှန်တရားဆိုရင်..
၁ရယ်..၂ရယ်မှာ..သူတို့အားသာချိန် ကြိုက်တာလုပ်စမ်းဆိုရင် ငါတို့လည်း သူတို့ပြုတ်တဲ့အချိန် ကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်မှာပဲ..။ ခေါင်းလျှိုဝင်ကြေးဆိုရင် အခုလို နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် ပေးဆပ်အနစ်နာခံစရာမလိုဘူး။ ၁၉၉၃ ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံ အစကထဲက ပြတ်နေပြီဆိုတာ မမေ့နဲ့နော်။ အထင်မကြီးရင်နေ အတိုက်အခံရဲ့ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို လျော့မတွက်နဲ့။
ဆိုတော့..ကိုယ်နိမ့်ပါးတဲ့အခါ နိုင်သူစားတမ်း လူထုဒဏ်ခတ်တာကို… စစ်တပ်က လိုလားသလား.. အချင်းချင်း သွေးကွဲပြီး တရုတ်နဲ့ကုလား ပြုသမျှနုရတဲ့ ဘဝကနေ မလွတ်ချင်ဘူးလား.. သိချင်မိသား
အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ၊ အသုဘ..။
ကြိုက်တယ်၊ အဲသလိုလေးတွေ ဆွေးနွေးကြပါ။
Agree to both Thu Gyee & ကိုကြောင်ကြီး
မိုက်ချက်ကတော. ကမ်းကုန်သွားပြီး..ဒါမျိုးအမြင်တွေ ပြည်တွင်းမှာများများတွေး ၊ များများပေါင်းပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကျူပ်တို.တွေ စစ်ကျွန်ဘ၀ကမကြာခင်လွတ်မှာပါ။ ကိုကျော်ဟန်၊ သူကြီးနဲ. ကိုကြောင် တို.ဆွေးနွေးတာထောက်ခံပါတယ်..။
ကိုယ်အထင်ကတော့ ပြည်သူတွေဟာ ဒီအခြေခံဥပဒေဝကီးပိုဘယ်လောက်ပဲ မကျေနပ်ပါဘူးလို.ဘဲပြောပြော
ဒီကြံ့ဖွတ်ကိုမကြိုက်ပါဘူးဘဲဆိုဆို သူတို့ကမဲအပြတ်အသတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ကြတာပဲ. ။ဆိုလိုတာကကြံ့ဖွတ်ကိုမဲထဲ့ခဲ့
ကြတာကိုး…။ ပြည်သူတွေကမထည့်ပါဘူး ကြိုတင်မဲတွေကြောင့်သော်၎င်း အများသောပြည်သူတွေကသွားမထည့်ခဲ့ကြလို့သော်၎င်း အခြားသောပါတီခယ်လေးတွေအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ
ကိုထည့်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို.ကနိုင်သွားတာဘဲလေ….။ ကြိုတင်မဲတွေဆိုတာကလည်းများသောအားဖြင့်သူတို့လူတွေဘဲ။ အရပ်သားဆိုရင် ၀န်ထမ်း အကြီးအကဲတွေ၊
ကုန်သည်စီးပွားရေးသမားတွေ ရဲဘက်တွေ၊ စစ်ဖက်တွေ ဒါတွေဟာကြံ့ဖွတ်မဲတွေဘဲ။ ဆိုတော့နှစ်၂၀ကျော်
တိုင်းပြည်ထဲစိမ့်ဝင်နေတာလူဦးရေ သန်း၆၀မှာသန်း၃၀လောက်ကသူတို.လူတွေဖြစ်နေပြီးသား…။ ဒါကြောင့််
တခါတလေတွေးမိတယ်။သတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရရင်သန်း၅၀ကျော်သောပြည်သူတွေစိတ်ဆင်းရဲနေရပါတယ်ဆိုတာတွေပေါ့။ ဟုတ်ပါ.မလားဆိုပြီးသံသယဖြစ်မိတယ်။ ဟုတ်တယ်ဆိုတာအစစ်အမှန်ဆိုရင်တော့ လူတွေက မဲပေးဘို.တောင်သတ္တိနည်းပါလားလို.ထင်မိတယ်။ အရေးကြီးတာကသူမဟုတ်တဲ့သူဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ်မဲအပြတ်အသတ်နိုင်ဘို့လိုတယ်လေ…။အခုသူတို.နိုင်သွားပြီဆိုတော့အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံရမှာပါဘဲ။